ICuba kunye nemvelaphi yegama layo | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | | Tyhubha
Sesona siqithi sikhulu eAntilles kwaye yenye yezona ndawo zintle zabakhenkethi kwiCaribbean. Indawo ekhethekileyo neyodwa ngenxa yezizathu ezininzi kunye nembali ende nenomdla. Kodwa, Livela phi igama leCuba? Imvelaphi yegama layo? Lo ngumbuzo esiza kuzama ukuwusombulula kule posi.
Inyani yile yokuba imvelaphi ye-etymological yelizwi Tyhubha ayicacanga kwaphela kwaye isengumba ophikisanayo phakathi kwabafundi namhlanje. Kukho iingcinga ezininzi, ezinye zamkelwe ngakumbi kunezinye, kwaye ezinye zazo zifuna ukwazi nyani.
Okokuqala, inqaku elibalulekileyo kufuneka licaciswe: nini UChristopher Columbus Ufike kwesi siqithi okokuqala (nge-28 ka-Okthobha i-1492), akazange nangaliphi na ixesha acinge ukuba uhamba ngenyawo kwilizwekazi elitsha. Ngapha koko, ngokwezibalo zabo eziphosakeleyo, loo mhlaba mtsha unokuba yiCipango kuphela (njengoko iJapan yayisaziwa njalo ngelo xesha), nalapho kwakungakhange kuthathelwe ngqalelo ithuba lokubhaptiza isiqithi.
UChristopher Columbus wafika kwesi siqithi ngo-Okthobha u-28, 1492, esiva okokuqala igama elithi "Cuba" emilonyeni yabantu bomthonyama.
Kwiminyaka kamva, iSpanish yagqiba kwelokuba ithiye le nto ngegama lika Isiqithi saseJuana, kwimbeko yenkosana encinci uJohn, okuphela komntwana oyinkwenkwe Ookumkani bamaKatolika. Nangona kunjalo, eli gama alikhange libambe. Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kwaphenjelelwa kukufa ngaphambi kwexesha ngo-1497 komntu owabizwa ukuba abe lilandela lesithsaba, eneminyaka eyi-19.
Emva koko, ngomthetho wasebukhosini we-28 kaFebruwari, 1515, kwenziwa iinzame zokuba igama elisemthethweni laseCuba lelo Isiqithi saseFernandina, ngozuko lokumkani, kodwa igama lendawo alizange libambe. Ngapha koko, izenzo ezisemthethweni zesiqingatha sesibini senkulungwane ye-XNUMX zibhekisa kulo mmandla phantsi kwegama leCuba.
1 Imvelaphi yemveli
2 Iminqweno yokufuna ukwazi malunga nemvelaphi yegama elithi Cuba
2.1 Iingcamango zesiPhuthukezi
2.2 Ithiyori yama-Arabhu
Namhlanje eyona nkcazo yamkelweyo yombuzo othi "livela phi igama leCuba" yile ka imvelaphi yemveli.
Abantu abaninzi baseCuba bayayithanda ingcinga yokuba igama lelizwe labo livela kwigama lendabuko lendabuko: Tyhubha, isetyenziswe mhlawumbi kulwimi oluthethwa ngu IiTainos. Eli gama liya kuthetha "Umhlaba" okanye "igadi." Ngokwalethiyori, ibizakuba nguColumbus ngokwakhe obeya kuliva eli hlelo okokuqala.
Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba kwa eli gama linye lalisetyenziswa nangabanye abantu abomthonyama bezinye iziqithi zeCaribbean, iilwimi zabo zazivela kwingcambu enye, usapho lweelwimi zama-Arauca.
Livela phi igama leCuba? Ngokwezinye iingcali, inokubhekisela kwiintaba kunye nokuphakama
Kwingcamango efanayo yemveli, kukho enye into eyahlukileyo ebonisa ukuba intsingiselo yeli gama inokunxulunyaniswa neendawo apho ukuphakama neentaba kugqame khona. Oku kubonakala ngathi kuboniswa ngamanye amagama endawo efanelekileyo kuyo ICuba, iHaiti kunye neRiphabhlikhi yaseDominican.
Utata IBartolomé de las Casas, nothathe inxaxheba ekoyiseni nasekushumayeleni kwesi siqithi phakathi konyaka we-1512 nowe-1515, kwimisebenzi yakhe wasebenzisa amagama athi "cuba" kunye no "cibao" njengezithethantonye zamatye amakhulu neentaba. Kwelinye icala, ukusukela ngoko kude kube namhlanje igama lomthonyama le ICuba kwimimandla yeentaba embindini welizwe naseMpuma.
Igama leCuba liya kuba lelinye lawona matyala apho imeko-mhlaba inika igama layo kwilizwe. Ngelishwa, ukunqongophala kwethu kolwazi malunga neelwimi zeTaino kunye ne-Antillean kusithintela ekuqinisekiseni oku ngokungqinelanayo.
Iminqweno yokufuna ukwazi malunga nemvelaphi yegama elithi Cuba
Nangona kukho ukuvumelana phakathi kwababhali-mbali kunye neengcali zeelwimi malunga nalapho igama laseCuba livela khona, kukho ezinye iingcamango ezinomdla ezifanele ukukhankanywa:
Kukho kwakhona Ingcinga yesiPhuthukezi Ukuchaza ukuba livela phi igama leCuba, nangona okwangoku kungathathelwa ngqalelo. Ngokwale nkolelo, igama elithi "Cuba" livela kwidolophu ekumazantsi ePortugal ebizwa ngelo gama.
Umfanekiso kaColumbus kwidolophu yasePortugal iCuba
"ICuba" yasePortugal ikummandla we Baixo Alentejo, kufutshane nesixeko saseBeja. Yenye yeendawo ezibanga ukuba yindawo yokuzalwa yaseColumbus (enyanisweni kukho umfanekiso oqingqiweyo walowo ubhaqileyo edolophini). Umbono oxhasa le mbono kukuba inganguye oya kubhaptiza isiqithi seCaribbean ngenkumbulo yelizwe lakhe.
Nangona i-hypothesis enomdla, ayinangxaki yomlando.
Okubi ngakumbi kunangaphambili, nangona ikwanabaxhasi. Ngokutsho kwakhe, igama elithi "Cuba" liza kuba yintlukwano igama lesi-Arabhu koba. Oku kwakusetyenziselwa ukumisela ii-mosque eziphakanyiswe yidome.
Ithiyori yama-Arabhu isekwe kwindawo yokufika kukaChristopher Columbus, the IBariay bay, okwangoku kwiphondo laseHolguín. Apho yayiya kuba yimilo ethe tyaba yeentaba ezikufutshane nonxweme ezazinokukhumbuza umatiloshe waleyo ye-Arab kobas.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » ICuba kunye nemvelaphi yegama layo